IChippa neTTM bazibekisele indawo kowandulela owamanqamu e-Nedbank | Scrolla Izindaba
IChippa neTTM bazibekisele indawo kowandulela owamanqamu e-Nedbank
IChippa United kanye neTshakhuma Tsha Madzivhandila iwona maqembu amabili okuqala e-Premiership azibekisele indawo kuma-semi final e-Nedbank Cup kule sizini.
IChilli Boys ibe ngeyokuqala ukudlulela phambili ngemuva kokushaya iqembu le-GladAfrica Championship iRichards Bay ngamabili kwelilodwa ngoMgqibelo e-Sisa Dukashe Stadium e-East London.
NgeSonto ebusuku kulandele iTshakhuma ngemuva kokuwina i-Vhembe derby ngesikhathi bedlala neBlack Leopards emdlalweni we-DStv Premiership e-Thohoyandou Stadium e-Limpopo.
ITshakhuma iwine lo mdlalo ngamabili eqandeni ukuze idlulele kwemine yokugcina futhi yashiya iLeopards ukuthi igxile esimweni sayo se-Premiership esingahambi kahle.
IChippa kanye neTshakhuma indlela abazimiselo ngayo kulo mncintiswano iyamangaza uma kubhekwa ukuthi abenzi kahle ku-Premiership.
La maqembu omabili abambene endaweni ye-13 kwitafula le-log ngamaphuzu ayi-16 kodwa iChippa ingaphambili ngomehluko wamagoli.
Amaphuzu amane kuphela ahlukanisa la maqembu amabili nokuba sezansi kwi-log.
Ngaphambi komdlalo wangoMgqibelo iChippa ihlulwe ekhaya ngaMaZulu ngoLwesithathu kanti lokho kwehlulwa kubasondeze endaweni esezansi kwi-log.
ITshakhuma naye ihlulwe emdlalweni wabo weligi ngoLwesithathu njengoba babuye bashaywa ekhaya yiGolden Arrows.
Bahleli endaweni ye-14.
Khonamanjalo ngeSonto ntambama, iPretoria Callies kube yilona lodwa iqembu le-GladAfrica Championship elidlulele kowandulela owamanqamu kule sizini.
ICallies ishaye iCape Town All Stars ngamahlanu kwamane ngesikhathi sekukhahlelwa amaphenalthi emdlalweni we-GladAfrica e-Danie Craven Stadium eKapa.
Umdlalo uphele zibambene ngamabili ngemuva kwesikhathi esingeziwe lapho iCallies eqede umdlalo isinabadlali abayishumi ngemuva kokukhishwa komdlali wasemuva u-Oupa Moeketsi esiwombeni sesibili sesikhathi esengeziwe.
Omunye umdlalo osele kowandulela owamanqamu usuphakathi kwabaphethe izinkomishi iMamelodi Sundowns kanye ne-Orlando Pirates ozodlalwa mhla zi-15 kuMbasa.
Ozonqoba lapho uzojoyina iChippa, iTshakhuma kanye neCallies kowandulela owamanqamu.